HomeWararka CiyaarahaHorudhac: Arsenal Vs Liverpool ee Koobka EFL Cup Lugtooda Labaad, Wararka Labada Koox iyo Shaxda Macquulka
January 20, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalada Kale, Horyaalka Ingiriiska 0
Arsenal iyo Liverpool ayaa isku arki doona Emirates Stadium Lugta labaad ee semi-finalka EFL Cup oo horay uga baaqday labada koox.
Ka dib markii ay barbaro goolal la’aan ah ku soo idlaatay lugtii hore ee isbuucii hore, labada kooxood ay ku loolamayaan inay finalka la ciyaaraan Chelsea.
Bukayo Saka , Emile Smith Rowe , Takehiro Tomiyasu , Cedric Soares iyo Calum Chambers ayaa dhamaantood shaki yar laga muujinayaa dhaawac ama daal, halka Sead Kolasinac uu ka tagay Gunners kuna biiray Marseille heshiis joogto ah.
Xhaka waxa uu qaadan doonaa hal kulan oo ganaax ah ka dib markii laga saaray lugtii hore, halka Martin Odegaard uu shaki ku jiro inuu kaliya dhameystay waqtigiisa karantiilnimada, ka dib markii uu laga helay COVID-19.
Dhanka kale Nicolas Pepe , Thomas Partey iyo Mohamed Elneny ayaa dhamaantood ku maqan koobka qaramada Afrika, halka Pierre-Emerick Aubameyang uu dib ugu soo laabtay England ka dib markii uu xanuun dhanka wadnaha ah ka soo gaaray COVID-19 waxaana uu mari doonaa baaritaano lagu ogaanayo xaaladiisa.
Iyadoo Albert Sambi Lokonga uu yahay khadka dhexe ee kaliya ee la aqoonsan yahay ee uu heli karo Arteta, Isbaanishka ayaa laga yaabaa inuu u yeero Ben White si uu uga shaqeeyo afarta dambe ee hore, taasoo ka dhigeysa in daafaca Rob Holding Gabriel Magalhaes uu ku jiro wadnaha daafaca.
Dhanka Liverpool, Salah, Mane iyo Naby Keita ayaa dhamaantood ku maqan waajibaadkooda Koobka Qaramada Afrika, halka ciyaaryahankii hore ee Gunners Alex Oxlade-Chamberlain uu dhaawac canqowga ah ka soo gaaray kulankii Brentford.
Thiago Alcantara (Sinta), Harvey Elliott (canqawga) iyo Nat Phillips (dhabanka oo jaban) ayaa sidoo kale dhaawac ku maqan, halka Divock Origi uu ka qeyb qaatay tababarka isbuucaan ka dib markii uu ka soo kabsaday dhibaato jilibka ah..
Klopp ayaa laga yaabaa inuu ka fikiro hal ama laba bedel oo shaxdiisa ah, iyadoo Minamino la filayo inuu ku soo laabto XI isagoo kula biiraya Roberto Firmino iyo Diogo Jota oo seddex weerar ah.
Daafacyada Ibrahima Konate , Joe Gomez iyo Kostas Tsimikas ayaa dhamaantood ah dookhyada Macalinka Jarmalka ee afartiisa danbe, halka Curtis Jones ama James Milner midkood uu qarka u saaran yahay inuu dhexda ka garab ciyaaro Fabinho iyo Jordan Henderson .